Maro ny olona tsirairay sy ny fianakaviana tsy miankina Reel ambanin'ny isan-karazany ny lanjan'ny drafitra politika fiantohana, ary izany no mahakasika ny fianakaviany mafy vola miditra sy ny fari-piainana. Izy ireo hahatakatra ny maha zava-dehibe azo antoka ny fandoavana ny premiums stoutly ary manao izany raha ny marina, fa ny ny fiantraikany teo amin'ny lafiny ara-bola amin'ny ankapobeny ny fari-piainana sy ny fianakaviana tsy very aminy - ka mila Scout fomba hamonjy lehibe eo amin'ny fiantohana drafitra tsy nanaiky lembenana ny hatsaran'ny efa misy planina. Sary an-tsaina ny fianakaviana handoa fiantohana ara-pahasalamana, an-trano sy ny fananana fiantohana, Auto fiara fiantohana, ary ny fiainana ankoatry ny zavatra hafa fiantohana, inona no ho tavela mba hikarakarana ny fianakaviana sy miasa avy nofy manokana sy ny tanjona? Ny valin'io fanontaniana io Mampiseho ilay antony lehibe tsy maintsy hamonjy amin'ny fiantohana, ary ireto manaraka ireto dia ny fomba:
i. Asandrato ny deductibles: Fantatrareo ny dikan'ny hoe hanangana na hampitombo ny deductibles, sa tsia? Izany dia midika fa mampitombo ny habetsahan'ny an-of-paosy mamintina mandoa ianao amin'ny toe-javatra tsy nahy mitaky onitra fiantohana anjara. Rehefa hanangana ny deductibles, fiantohana ny orinasa mahita anao toy ny fampihenana ny zava-nitranga ny onitra fitarainana taminy ary dia mandeha ho azy ny premiums mampihena ny tena takatry ny tahan'ny - hahatonga anao hahazo hamonjy lehibe ao amin'ny drafitra fa tsy afaka atao raha tsy misy, ary mety tsy ho azo atao raha tsy misy ny nanangana deductibles.
II. Mitenena amin'ny fitaovana amin'ny fihenam-bidy: Miresaha amin'ny fiantohana mpandraharaha mba handinika ny fiantohana politika sy drafitra ary mahita ny fomba mendrika ny discounted ny tahan'ny amin'ny premiums. Maro ny olona ho mendrika ny fiantohana fihenam-bidy izay tsy mahafantatra akory, ary mandeha amin'ny fandoavana ny tahan'ny avo noho ny fiantohana ny orinasa no ho farany ny mampahafantatra azy ireo raha tsy hihazona fifandraisana tsara ny solontenany. Ny solontenany avy dia tokony hiasa ny fihenam-bidy sy ny hanampy anao mba hamonjy lehibe avy amin'ny anton-javatra izay mankasitraka ny politika sy ny habetsaky ny drafitra politika manana ny fiantohana orinasa.
iii. Asandrato ny isa bola: Orinasa fiantohana mihevitra anao ho loza lehibe ho an'ny antoka rehefa manana ratsy bola ampy. Izay mety tsy fantatsika dia ny hoe fiantohana orinasa manao taratasim-bola fototra eo aminao, ary ny fomba maro ny bola na ny ratings dia. Raha toa ka maro ny bola ambany dia ambany indrindra dia ianao namely Premium avo ny tahan'ny rehefa antoka ianao, fa ny miezaka mafy mba hanamboarana hanangana ny ratings bola dia mampihena ny tahan'ny Premium. Raha toa ka efa mandoa avo dia avo ny tahan'ny noho ny ratsy bola, manamboatra trano maro talohan'ny azy ireo, dia tsy maintsy mampahafantatra azy ireo ny fiovana natao mba afaka ataony nihena ny tahan'ny Premium avy hatrany.
iv. Ampiasao ny orinasa ihany: Izany no mahatonga ny fahaiza-: mampiasa izany na orinasa fiantohana mafy ny antoka rehetra ny fianakavianao, fananana, fahasalamana sy ny zavatra hafa. Na ny marimarina kokoa, bola rehetra fiara mitovy amin'ny orinasa fiantohana; fiantohana ny fianakaviana rehetra fahasalamana sy ny fitsaboana izany drafitra amin'ny fiantohana mafy; fiantohana an-trano sy ny fananany rehetra tamin'ny mitovy fananan'ny orinasa fiantohana, ary ianareo dia ho afaka ny hamonjy ny lehibe amin'ny fiantohana ireo rehetra politika.
v. Ataovy izay hahazoana ny an-trano sy ny fiara: Hametraka filaminana endri-javatra sy ny fitaovana ao an-tranony sy ny fiara mba hahasakana misy tranga ny burglary, fanimban-javatra sy ny halatra. Fitaovana fiarovana toy ny famonoana afo, burglary alarms, anti-hidin-trano fiarovana fitaovana sy ny endri-javatra hafa mety hampihenana na manamaivana ny zava-nitranga ny loza eo amin'ny tokantrano sy fiara, ary izany dia tena hamonjy anao vola satria dia mandeha ho azy ny insurer mampihena ny tahan'ny Premium.
Tags:5 Fomba azo antoka Save Big amin'ny fiantohana, Save Big On Your Insurance